Akhri: Muxuu Siilaanyo ka yiri hadal laga sheegay Warancadde? – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Madaxweynaha maamulka Somaliland, Axmed Maxamed Max’ud Siilaanyo ayaa si kulul uga hadlay hadal la sheegay inuu kasoo yeeray wasiirka arrimaha gudaha Maamulkaas, Cali Maxamed Warancadde, kaasoo ahaa in Somaliland loo yaqaano maamul ka tirsan dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Cali Warancadde ayaa horay u sheegay in beesha caalamku maamulka Somaliland u aqoosantahay qeyb ka mid ah Soomaaliya oo ay weliba ka horeeyaan, Dowladda Federaalka ah iyo Puntland.
“Beesha caalamku waxey Somaliland u aqoonsatahay maamul goboleed ka mid ah Soomaaliya” ayuu yiri Warancadde oo intaa ku daray “Waxaa naga horeeya Dowladda Federaalka, Puntland, Somaliland ayaa ku xigta, iyo Galmudug, intaas oo dhan waxey hoostagaan Dowladda Federaalka ah”.
“Madaxweynaha Somaliland waxaa loo aqoonsan yahay inuu yahay gudoomiye gobol ka mid ah Soomaaliya” ayuu sidoo kale yiri Cali Maxamed Warancadde.
Axmed Siilaanyo oo arrintaan ka hadlay ayaa yiri “Cali Warancadde waxaad umadda u aqrineysaan wax aan idinka aqrisanayo maaha, shacabka reer Somaliland waxaan leenahay waxaas ha dhegeysana”.
“Hadalka Wasiirka Ujeedkiisa ma aanan fahmin Shacabka Soomaaliland waxaa ay leeyihiin Jamhuuriyada u gooni ah, cid Soomaaliya nagu qusbi karta majirto, yaan umadda been iyo hinaasi loo sheegin ayaanu leenahay” ayuu yiri Siilaanyo.
Maamulka Somaliland oo sheegta inuu ka go’ay Soomaaliya ayaa aduunku u diiday aqoonsi dowladnimo, waxaana wax laga siiyaan taakulada loogu talagalay Soomaaliya.